Faah Faahin: Weerar iyo Dagaal Fool ka Fool ah oo ka dhacay Jubbada Hoose - Hablaha Media Network
Faah Faahin: Weerar iyo Dagaal Fool ka Fool ah oo ka dhacay Jubbada Hoose
HMN:-Wararka aan ka heleyno deegaanka Hoosingow ee Gobolka Jubbada Hoose ayaa ku soo warramaya in Weerar iyo Dagaal fool ka fool ah uu ka dhacay Tuulo ku dhow deegaankaasi oo lagu Magacaabo Haameey.
Tuuladaan oo qiyaastii 20 km u jirta deegaanka Hoosingow ee Gobolka Jubbada Hoose ayaa Kolonyo Ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM ay la socdeen waxaa lagu weeraray Qarax Miino oo mid ka mid ah Gaadiidkii Kolonyadaas haleeshay.
Gaariga Qaraxaasi ku basbeelay ayaa nuuciisa la sheegay in uu ahaa Beebe, waxaana Qaraxa kadib Dagaal fool ka fool ah uu dhexmaray Ciidamada AMISOM iyo dagaalyahanada Al Shabaab.
Ilo deegaanka ah oo Shabelle la hadlay ayaa u xaqiijiyay in 9 Askari oo 5 ka mid ah ay ahaayeen Ciidamada Kenya ku dhinteen weerarka iyo dagaalka xigay, halka 4 kale ay ahaayeen Ciidamo ka tirsan kuwa Maamulka Jubbaland.
Al Shabaab ayaa dhankooda baraha ay Internetka ku leeyihiin ku sheegtay in 15 Askari ay ku dileen weerarkaasi.
Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay Saraakiisha AMISOM iyo kuwa Jubbaland ee ay uga hadlayaan weerarkaasi.
Sidoo kale ilo deegaanka ah ayaa ku soo warramaya in Diyaarado Dagaal oo loo maleynayo in ay yihiin kuwa Kenya ay xalay duqeeyeen halka dagaalku ku qabsaday Kolonyada AMISOM iyo Ciidamada Jubbaland.
Ma cadda khasaaraha ka dhashay duqeymahaasi ka dhacay Tuulada Haameey ee hoostagta deegaanka Hoosingow ee Gobolka Jubbada Hoose.